Home Wararka Dagaal khasaare ka dhashay oo ka dhacay duleedka magaalada Dhuusamareeb
Dagaal khasaare ka dhashay oo ka dhacay duleedka magaalada Dhuusamareeb
Faahfaahin ayaa ka soo baxaysa dagaal xalay ka dhacay duleedka waqooyi ee magaalada Dhuusamareeb. Dagaalkan ayaa sida la sheegay qarxay kadib markii Ciidamo ka tirsan Ahlusunna ay wada u galeen kolonyo ay wateen Ciidamada Galmudug.
Koox ka tirsan Ahlu-suna ayaa la soo sheegayaa iney dhexda u galeen laba gaari oo uu watay taliyaha ilaalada madaxtooyada Dhuusamareeb. Ugu yaraan afar askari ayaa ku dhintay dagaalka halka lix kalena ku dhaawacantay islamarkaana lagu gubay gaari Cabdi-bile ah.
Inta la xaqiijiyay 5 Askari ayaa ku geeryootay oo dhinacyada ka kale tirsan, waxaana ku dhaawacmay in ka badan, iyadoo warar ay sheegayaan in Ciidanka Ahlusunna ay gubeen Mid kamidaa 2- Gaari oo ay wateen Ciidamadda Dowladda ayna qaateen Qorigii ku xirnaa iyo 2 qoro oo Dabajeex ah.
Lamaaha amaanka Magaalada Dhuusamareeb kama aysan bixin wax faah-faahin ah dagaalkaan ka dhacay duleedka magaalada Dhuusamareeb iyo khasaaraha ka dhashay, balse waxaa lagu wadaa in ay ka hadlaan saacadaha soo socda.
Muddooyinkii ugu dambeeyay, dagaalamayaal ka tirsan Ururka Ahlu Sunna, waxaa ay weeraro qorsheysan ka geesanayeen qeybo ka mid ah deegaano ka tirsan maamulka Galmudug, kuwaas oo uu ka dhasho khasaaro dhimasho iyo dhaawac, iyadoo uu haatan Ururka Ahlu-sunna uu fadhigoodu yahay deegaanka Bohol ee Gobolka Galgaduud.
Previous articleCulumada Soomalida oo ku baaqay kacdoon ka dhan ah Farmaajo
Next articleWasiir hore oo uga digay Deni inuu dhaqaalaha Puntland u isticmaalo doorashadiisa
Fahad Yasin & Xasan D Aweys oo lagu eedeeyay in ay...